आज २०७७ कात्तिक ३ गते सोमबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस – Rapti Khabar
असोज १३, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९ सय ३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा थप ९ सय ३४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । यो एकैदिन संक्रमित हुनेमध्ये अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो । मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका काठमाडाैँमा […]
आज २०७७ कात्तिक २ गते सोमबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस